About Us - Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
Med-linket isku hal-abuurnimo, ayaa ku dhow inay baahida caafimaad iyo suuqa, ayaa si guul leh horumariyo lacag wadarteedu tahay in ka badan 3,000 oo noocyada kala duwan ee wax soo saarka sida kiniisadaha caafimaad cable, dareemayaal caafimaad, qalabka baaritaanka caafimaadka qoyska, qalabka caafimaadka elektaroonik ah oo lagu isticmaalo in kormeerayaasha, ECG, Holter, EEG, ultrasound B, kormeerayaasha uurjiifka iyo qalabka kale ee, ka heleen 25 utility model shatiyada iyo 2 shatiyada been abuurtay, alaabta oo dhan waa la xuquuqda hantida aqooneed madax banaan.
Medlinket higsanayaa hirgelinta ISO 13485 ee: 2003 nidaamka maaraynta tayada shahaado TUV in Germany, kuwaas oo alaabta Shahaado by shahaado CE, FDA iyo CFDA. Shirkadda iska leh saldhig wax soo saarka iyo warshadaha ee Shenzhen oo Shaoguan ah, iyo dhisayaa mid 100,000 fasalka-koowaad
workshop nadiif dustless in our warshadaha. waxyaabaha lagu sameeyey si waafaqsan heerarka caalamiga ah ee ugu dambeeyay, oo ay leeyihiin sifooyinka non-sumoobo, cimri dherer, anti-faragelinta iyo raaxada.
Medlinket dhaqmayso mabda 'adeeg ah "macaamiisha ugu horeysay". Tan iyo dhisidii, waxaa la quduuska ka dhigay iyo hoos-to-dhulka, oo ku siin kara adeegyada OEM / ODM in ay u daboosha baahida macaamiisha.
Waqtigan xaadirka ah, waxyaabaha Medlinket iyo xal caafimaad ayaa codsatay in ka badan 90 dal iyo gobolada adduunka oo dhan, iyo badeecada ayaa badisay ammaan iyo trust in suuqa caalamiga ah. isticmaalo Medical iyo qalab caafimaad ayaa sidoo kale si degdeg ah oo galaya isbitaalada si fiican u yaqaan, xarumaha caafimaadka bulshada, xarumaha caafimaadka, hay'adaha hawlgabka, xarumaha baaritaanka jirka iyo beeraha kale ee Shiinaha.